Usbuuca Cubist: 10 Casharro Sare (I) | Abuurista khadka tooska ah
Ma rabtaa inaad barato inaad barato kheyraadka qurxinta qurxinta? Ka soo horjeedka waxa ay u muuqan karto, waxaan kuu sheegi doonaa in ka shaqeynta curinta iyo sawir-qaadista noocaan ah ay aad u fudud tahay. Uma istaagaan dhibaatadooda laakiin waxay u taagan yihiin heerkooda dhammaystiran. Shaqada noocan ah badanaa waa mid aad u hawl badan, in kasta oo ay kuxirantahay heerka kakanaanta ee aan rabno inaan ka shaqeyno. Waqtigan xaadirka ah waxaan kuu soo jeedinayaa toban tusaale si aad u bilawdid inaad kululaato matooradaada. Layligani waxay wax badan kaa caawin doonaan inaad si fiican u hagaajiso farsamooyinkaaga xulashada, isbeddelka, iyo qalabka wax lagu beddelo. Haddii aan haysanno dulqaad badan oo aan awoodno inaan adkeysano, waxaan gaari karnaa mucjisooyin dhab ah. Inta badan layliyadaan waxaa loogu talagalay in lagu sameeyo Adobe Photoshop, in kasta oo aan waliba qaar ama qaar kale ku daray si aan uga shaqeeyo Adobe Illustrator.
Isku soo ururinta hore waxaad ii sheegtay in xiriiriyayaashu aysan shaqeyn oo ay fariimaha qaladka ah soo muuqdeen. Hadday taasi dhacdo, waa inaad nuqul ka dhigtaa oo keliya iskuxirayaasha aan hoos dhigey sawir kasta oo ku yaal bar cinwaanka qafiskaaga. Si kastaba ha noqotee, waxay noqon kartaa in waqti kadib boggaga qaar ay tirtiraan waxyaabaha ay ka kooban yihiin, laakiin waqtiga qorista maqaalkan dhammaan casharada ayaa la heli karay.
Saacadda Gawaarida (Tababbarka loogu talagalay Adobe Photoshop) asktutorial.com/create-cubist-effect-with-photoshop-cs6/
Weli nolosha qaabka ugu caansan ee kubeega (Casharrada loogu talagalay Adobe Photoshop) www.photoshopsupport.com/tutorials/or/cubism.html
Qaab-dhismeedka saddex-geesoodka ah ee qarsoodiga ah iyo cajiibka ah (Casharrada loogu talagalay Adobe Photoshop) www.photoshoplady.com/tutorial/design-a-great-geometric-lighting-effect/4147
Jimicsi loogu talagalay Adobe Illustrator ee vectorization iyo gemoterization sawir ah http://blog.advancedphotoshop.co.uk/general/create-polygon-graphics/
Halabuurka dhalaalaya ee sheygagonal waxyaabo abduzeedo.com/hexagon-bokeh-effect-photoshop (Layli ku shaqee Adobe Photoshop)
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Tababarada » Cubist Weekend: 10 Casharro Sare (I)